WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay In Aad Ka Ogaato Halista Ku Xeeran Kulanka El Clasico-da Kadib Ku Dhawaaqistii Xoriyada Catalonia Iyo 88 Sano Kadib Kulanka El Clasico Oo Hubanti La’aan Galay. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay In Aad Ka Ogaato Halista Ku Xeeran Kulanka El Clasico-da Kadib Ku Dhawaaqistii Xoriyada Catalonia Iyo 88 Sano Kadib Kulanka El Clasico Oo Hubanti La’aan Galay.
Baarlamaanka gobolka Catalonia ayaa cod aqlabiyad ah ku meel mariyay gooni isku taaga Catalonia kadib markii ay codkii loo qaaday meel marinta aftidii dadwayne ay keentay in baarlamaanka Catalonia ay ku dhawaaqaan in ay ka go’een Spain inteeda kale. Haddaba siyaasada cakiran ee Catalonia iyo Spain u dhexaysa ayaa muddo soo jirtay waxayna mugdi wayn galisay kulanka kubbada cagta heerka kooxeed ugu wayn ee El Clasico kaas oo soo jiray muddo 188 sano ah.
Baarlamaanka Catalonia ayay 70 xubnood u codeeyeen in Catalonia ay xor ka noqoto Spain iyada oo 10 xubnood ay iska diideen in Catalonia ay xoriyad qaadato halka 2 cod ay noqdeen kuwo aan waxba lagu qorin oo warqado madhan la soo saaray, waxaana sidaa lagu ansixiyay in Catalonia ay noqoto wadan ka madax banaan Spain inteeda kale.
Haddaba maxaa xigi doona? Miyaa la soo gaadhay dhamaaadka kulanka xiisaha badan ee El Clasico? Miyay kooxaha ree Catalonia qayb ka sii noqon doonaan horyaalka La Liga? Haddii ayna qayb ka sii noqon doonin halkee ayay ka ciyaari doonaan?. Su’aalahan iyo kuwo kale oo badan ayaanu inta aanu warbixintan ku jirno idiin soo gudbin doonaa.
Haddaba shabakada Gool24.net oo aad uga barateen warbixino dhamaystiran ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa saamaynta la filayo in ay siyaasada cusub ee gobolka Catalonia ay ku yeelato kubbada cagta Spain gaar ahaan kooxaha ree Catalonia, balse waxay su’aasha ugu muhiimsani tahay goorma ayay saamayntani dhici kartaa?.
Aan ku horayno taariikhda kooban ee horyaalka Spain ee La Liga iyo waqtigii uu soo bilawday iyo waliba sida kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay yihiin kuwa udub dhexaadka u ah ee haddii midkood la waayo aanu ka duwanaan doonin horyaalada Germany ee Bundesliga iyo waliba France ee Ligue 1.
Horyaalka Spain ee La Liga ayaa la aas aasay sanadkii 1929 kii waxayna kooxdii ugu horaysay ee koobkan dhegaha qabtay ahayd kooxda Barcelona ee uu hadda mustaqbalkii ay koobkan ku lahayd uu mugdigu ku jiro. Laga soo bilaabao waqtigan oo hadda laga joogo 88 sanadood, waxaa jiray saddex kooxood oo kaliya oo aan waligood heerka labaad uga dhigin La Liga waxayna kala yihiin Real Madrid, Barcelona iyo Athletic Bilbao.
Markii ay Barcelona ku guulaysatay koobkii ugu horeeyay ee La Liga ee sanadkii 1929 kii waxaa labadii sano ee ku xigtay koobkan ku guulaysatay kooxda Atheltic Bilbao taas oo koobkan loo caleemo saaray sanadihii 1930 iyo 1931 kii lakaiin Real Madrid ayaa koobkeedii La Liga ugu horeeyay hanatay sanadkii 1932 kii halka koobkeedii labaad ay raacsaday isla sanadkii ku xigay ee 1932 kii.
Balse Atletico Bilbao ayay ahayd kooxda markiiba koobabka ugu badan ku guulaysatay iyada oo koobka La Liga ku guulaysatay sanadihii 1930, 1931, 1934 iyo 1936 iyada oo waliba markale ahayd kooxda kaalinta labaad gashay sanadihii 1932 iyo 1933 kii ee ay Real Madrid ku soo guulaysatay.
Laakiin waxa uu horyaalka La Liga xifiltanka ugu wayni ku soo dhex maray kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo kulankooda loo bixiyay El Clasico iyada oo Real Madird ah kooxda koobabka ugu badan ee La Liga oo 33 koob ah ku soo guulaysatay halka Barcelona ay 24 koob soo hanatay.
Laakiin koobka horyaalka Spain ee La Liga ayaan la ciyaarin sanadihii 1936 iyo 1939 kii kadib markii uu dalka Spain ka qarxay dagaal sokeeye. Haddaba waxa laga cabsi qabaa in dagaal kale oo sokeeyo uu ka dhex qarxo Spain iyo Catalonia . Markii ay baarlamaanka Catalonia u codeeyeen madax banaanida 40 daqiiqo oo kaliya kadib amar ka soo baxay caasimada Madrid ayaa amar toos ah loogu soo rogay gobolka Catalonia taas oo laga cabsi qabo in ay markale dagaal sokeeyo keeni karto.
Haddii aan intaa ku soo dhaafno taariikhda kooban ee horyaalka La Liga iyo waqtigii uu soo bilawday aan u soo laabanyo saamaynta ay madax banaanida Catalonia ku yeelan karto kubbada cagta Spain iyada oo waliba aanu si gaar ah u eegi doono sharci ahaan iyo waliba siyaasada xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA iyo dhacdooyinka sidan oo kale ah.
Ugu horayn kooxda Barcelona oo hore ula safatay gobolka ay ka dhisan tahay ee Catalonia ayaa ka baaqsatay inay war saxaafadeed rasmi ah ku taageerto ama ay kaga soo horjeedsato ansixinta baarlamaanka gobolka Catalonia ee gooni isku taaga waxayna fahsan yihiin in waqti xaadirkan ay xaaladu tahay mid xaasaasi ah oo wax walba oo ay uga hadlaan uu dhibaato u keeni karo.
Laakiin intii aan lagu dhawaaqin gooni isku taaga Catalonia waxa uu madax waynaha Barcelona ee Bartomeu uu cadeeyay in kooxdiisu ay doonayso sidii ay qayb uga sii ahaan lahayd horyaalka La Liga laakiin taasi ma aha mid ay Barcelona go’aamin karto waxaana arintan si xoogan uga soo horjeeda madax waynaha maamulka La Liga ee Javier Tebas oo sanado badan soo sheegayay in aan la aqbali doonin kooxaha ree Catalonia marka ay xoriyada qaataan.
Laakiin sidoo kale maamulka La Liga ayaan ahayn kuwo si rasmi ah kaliydood u go’aamin kara haddii ay kooxaha ree Catalonia qayb ka sii ahaanayaan iyo haddii laga saarayo tartamada Spain, waana arin sharci oo ay ku lug leeyihiin xidhiidhka kubbada cagta Spain, wasaarada ciyaaraha si la mid ah FIFA oo go’aamisa sharciga guud ee kubbada cagta.
Dhinaca kale in xidhiidhka kubbada cagta Catalonia ay FIFA aqbasho ayaa waqti dheer oo ilaa lix sano ah qaadan karta halka ayna wax sahlan noqon doonin xidhiidhka kubbada cagta Spain ee RFEF iyo maamulka La Liga ay markiiba ku dhiiran karaan in kooxaha ree Catalonia tartanka laga saari karo maadaama oo marka hore loo baahan yahay in waxyaabo sharci ah la meel mariyo.
Miyaa kooxaha ree Catalonia xili ciyaareedkan laga saari karaa horyaalka La Liga?
Wax macquul ah ma aha in kooxaha Barcelona, Espanyol iyo FC Girona markiiba laga saaro horyaalka La Liga waxayna wax walba sii ahan doonaan sida ay hadda yihiin ilaa dhamaadka xili ciyaareedkan. Waqti xaadirkan Catalonia waxay wali ka sii mid tahay dawlada Spain waxaana kaliya la shaaciyay in gooni ay uga go’aayaan, taas oo la micno ah in ugu yaraan ay kooxaha ree Catalonia dhamaysan doonaan xili ciyaareedkan.
Laakiin xaalada ayaa isbadali doonta marka uu xidhiidhka kubbada cagta gobolka Catalonia uu helo sharciyadiisa taas oo aan la filayn in ay ku dhacayso muddo lix bilood ah, waana sababta ayna suurtogal u ahayn in xili ciyaareedkan oo socda laga saari karo kooxaha ree Catalonia.
Balse marka uu xidhiidhka kubbada cagta Catalonia helo sharciyadiisa waxaa waajib ku noqonaysa in sharciga Spain aanu u ogolayn in ay kooxaha ree Catalonia ka soo muuqan karaan La Liga ama koobanka maxaliga ah iyada oo sharciga Spain uu ogol yahay in kooxaha Andorra oo kaliya ay yihiin kuwa iyaga oo aan aan Spain ahayn ka hoos ciyaara maamulka caasimada Madrid.
Haddii lix bilood gudahood ay xidhiidhka kubbada cagta Catalonia ku helaan sharciyada ay doonayaan waxay taasi la micno tahay in xili ciyaareedka soo socda ayna kooxaha ree Catalonia ka qayb gali doonin horyaalka La Liga haddii inta ka horaysa aan isbadal lagu samayn sharciga Sports ee dalka Spain, waxaana haddii ay Spain iska diido wax ka badalka sharcigeeda halkaas ku joogsan doona kulanka El Clasico-da iyo ka qayb galkii kooxaha ree Catalonia ee La Liga ee muddada 188 ka ah soo socday.
Sida uu wargayska Marca ee Madrid ka soo baxay qoray dawlada Spain ayaan wax qorshe ah ka lahayn in ay badasho sharcigeeda Sportska si ay kooxaha ree Catalonia ugu golaan karto in ay La Liga iyo koobabka maxaliga ah qayb ka sii noqon karaan taas oo halis wayn ku ah kulanka heerka kooxeed ee aduunka ugu xamaasada badan.
Haddii aan soo dhaafno heerka gudaha Spain ee kooxaha Catalonia waxaa sidoo kale jirta hubanti la’aanta ay Barcelona iyo kooxaha ree Catalonia ku wajihi karaan tartamada Yurub. FIFA ayaan markiiba hore ka aqbali doonin xidhiidhka kubbada cagta Catalonia waxaana sida wadamo hore oo xaalad soo maray laga bartay ay qaadan kartaa sanado inkasta oo ay ku xidhan tahay aragtida maamulka FIFA iyo xalada taagan.
Haddii aan hoos ugu sii degno ka qayb galka Barcelona ee tartanka Champions Leaque ayaa ah waxyaabah kale ee ugu muhiimsan ee ay maamulka Camp Nou ka walwalsan yihiin. Haddii kooxaha ree Catalonia loo ogolaado in ay La Liga ka sii ciyaaran wax dhibaato ahi ma jiri doonto iyada oo Barcelona iyo kooxaha kale ee Catalonia ay sida hadda uga qayb gali karaan La Liga.
Laakiin haddii ay dhacdo in Catalonia ay samaystaan horyaal iyaga gooni u ah waxay markaas noqonaysaa mid xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA uu go’aan ka gaadhayo iyada oo UEFA u baahan shuruudo gaar ah in ay buuxiyo wadan kasta oo qayb ka ah wadamada hoos yimaada UEFA ee ay kooxahoodu ka ciyaaraan Champions Leaque ama Europa Leaque.
Maxay Yihiin Doorashooyinka U Furan Kooxaha Kubbada Cagta Ree Catalonia Kadib Gooni Isku Taagooda Gobolkooda looga dhawaaqay?
Waxaa jira saddex doorasho oo horyaal kooxaha ree Catalonia iyo xidhiidhkooda kubbada cagta waxaana ugu muhiimsan in ay qayb ka sii ahaadaan horyaalka ay hadda ka tirsan yihiin laakiin ma aha wax iyaga gacanta ugu jira waana mid sida aynu soo sheegnay hanaan sharci oo dheer ku taxan isla markaana ilaa ka bilaamaya maamulka La Liga, Xidhiidhka kubbada cagta Spain, dawlada Spain oo ay matalayso wasaarada Sportska iyo waliba saamaynta sharciga FIFA.
Haddii maamulkada kubbada cagta Spain ay sifo sharci daro ah ku caydhiyaan kooxaha ree Catalonia waxay taasi keeni kartaa in FIFA ay ganaax ku soo rogto Spain iyo kooxaheeda si la mid ah xidhiidhka kubbada cagta iyada oo xataa koobka aduunka laga ganaaxi karo.
Doorashada labaad ee kooxaha ree Catalonia u furan haddii Spain laga diido ayaa ah in ay ka ciyaari karaan horyaalada kale ee Yurub sida horyaalka France, horyaalka Germany, Italy ilaa xataa horyaalka Premier Leaque balse dhamaantood waxay ku xidhan yihiin in wax ka badal lagu sameeyo sharciyadooda si la mid ah sida ay Spain sharcigeeda isbadal ugu samayn doonto haddii ay kooxaha ree Catalonia oo Spain xor ka ah ay ugu ogolaan karaan horyaalkooda.
Doorashada aan hadda macquulka u muuqan balse ay suurtogalka tahay in la samayn karo ayaa ah in Catalonia ay samaysan karto horyaal u gooni ah balse kooxaha hadda Yurub ka ciyaaraya ee ay Barcelona ugu horayso ayaan qodobkan waqti xaadirkan diyaar u ahayn. Gooni isku taaga Catalonia ayaan saamayn ku lahayn kaliya kooxaha kubbada cagta balse waxay sidoo kale la mid ah dhamaan Sportska kala duwan ee kale.
Samayn Dhaqaale oo Intee Leeg Ayay Keeni Kartaa In Spain Ay Waydo Kulanka El Clasico?
Marka laga yimaado saamaynta kubbada cagta ay ku yeelan karto kulanka El Clasico oo meesha uga baxay siyaasada Spain iyo Catalonia waxaa ka sii muhiimsan dhaqaalaha ay kooxaha Real Madrid, Barcelona, maamulka La Liga iyo waliba dawlada Spain ay ku waayi doonaan iyada oo kulankani uu yahay kulanka ugu dakhli soo saarka badan.
Daraasad uu sameeyay Sports Business Institute, ayaa lagu ogaaday in sanadkii la soo dhaafay ee 2016 kooxaha Rea Madrid iyo Barcelona ay soo saareen boqolkiiba 0.11 dakhliga guud ee Spain taas oo la micno ah in 1000 euros ee dalka Spain laga soo saarayba ay kooxaha Madrid iyo Barca soo saaareen 1.11 euros taas oo muujinaysa heerka laayabka leh ee dakhliga kooxahani uu ku leeyahay dhaqaalahe guud ee Spain.
Dhinaca kale majalada Forbes ee qiimaynta dhaqaalaha daraasadaha badan ku samaysa ayaa kooxda Barcelona ku qiimaysay 3.25 BILYAN euros taas oo la micno ah in meesha ka saarista Barcelona ay dhabar jab ku noqonayso kulankii ugu dakhliga badnaa uguna daawashada badnaa La Liga.
Dhaqaalaha horyaalka La Liga ayaa lagu qiimeeyay 2.437 bilyan euros waana horyaalka saddexaad ee ugu dakhliga badan laakiin dakhligan ayaa qayb ahaan ka soo baxay Real Madrid iyo Barcelona iyada oo 1.382 bilyan euros uu yahay dhaqaale ka yimid labada kooxood ee La liga ugu waa wayn.
Xili ciyaareed kasta Real Madrid iyo Barcelona waxay ugu yaraan wada ciyaaraan labada kulan ee horyaalka laakiin marar badan waxaa soo baxa kulamo kale oo maxali ah inkasta oo ay yar tahay kulamada yurub ee ay wada ciyaaraan, laakiin haddii la soo qaato kaliya labada kulan El Clasico ee Bernabeu iyo Camp Nou waxaa ka soo baxa dakhliga ugu badan ee maamulka La Liga iyo Spain u soo hoyda ee ay sidoo kale labadan kooxood ku noqdeen kooxaha aduunka ugu saamaynta badan.
Haddii aan tusaale kooban u soo qaadano dakhliga laga helo kulanka El Clasico waxaa kaaga filnaan kara kulankii saaxiibtinimo ee horaantii bilawgii xili ciyaareedkan ka dhacay Miami kaas oo bishii August ay Real Madrid iyo Barcelona wada ciyaareen kaas oo ay daawadeen dad sare u dhaafay 200 milyan oo qof sida lagu xusay warbixin lagu daabacay wargayska Sport.
Waxaa intaas dheer in tikhidadhii lagu daawanayay kulankii bishii August ka dhacay Miami inuu sarre u dhaacay 20,000 kun oo dollar, waxayna ahayd lacag waali ah oo laga sameeyay kulan xataa aan tartan ahayn. Laakiin iyada oo tani jirto wali madax waynaha maamulka La Liga ee Javier Tebas ayaa aaminsan in kadib xoriyada Catalonia ay meesha ka baxaan kooxaha gobolkan ka soo jeedaa.
Miyay Horyaalada Yurub Soo Dhawayn Doonaan Kooxaha Ree Catalonia Haddii Horyaalka Spain Laga Saaro?
Ilaa hadda horyaalka France iyo Russia ayaa ah labada horyaal ee diyaarka u ah in ay ka faa’iidaystaan xaalada Spain iyo Catalonia, waxayna u arkaan in haddii ay Barcelona horyaaladooda ku soo biirto uu noqon karo mid si wayn sarre ugu kaca.
Horyaalka France ee Ligue 1 waxaa haddaba ka ciyaarta kooxda AS Monaco oo ka dhisan Monaco oo ah magaalado ka madax banaan France isla markaana ay qoyska boqortooyada House of Grimaldi maamulaan. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 38,499 kun oo qof laakiin iyaga oo xor ka ah France waxaa haddana kooxda AS Moanco loo ogol yahay in ay ka ciyaaro horyaalka France, waxaana hore arintan tusaale loogu soo qaatay in Barcelona ay sidan oo kale uga ciyaari karto Ligue.
Horyaalada Yurub ayaa la aaminsan yahay in ay xiisaynayaan in Barcelona ay ku marti qaadaan horyaaladooda laakiin waxaa sidoo kale la soo qaaday in kooxaha waa wayn ee Yurub ay xalaadan uga faa’iidaysan doonaan in ay ku samaystaan horyaalka waqtiga badan laga soo hadlayay ee European Super Leaque taas oo uu hore wargayska The Sun ushaaciyay in xaalada Barcelona ee Catalonia ay gun dhig u noqon karto.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay kooxaha ree Catalona lagu qasbo in ay La Liga ka baxaan wixii xili ciyaareedkan ka danbeeya waxay markaas u furnaan doonaan in ay eegaan dooraasho kasta oo ay haystaan waxaana ilaa inta go’aan rasmi ah la gaadhayo uu mugdi ku jiri doonaa mustaqbalka kulanka El Clasico.
Haddaba akhriste, sideed u aragtaa kulanka El Clasico oo meesha ka baxa iyo qaabka uu horyaalka Spain noqon karo iyada oo ayna jirin xamaasada ay abuuraan Real Madrid iyo Barcelona? Aragtidaada waxaad nagula wadaagi kartaa fariimaha Facebook ee hoose sidoo kale warbixintan la share-garee asxaabta kale.